Cabdi Xaashi oo ka hor yimid hannanka doorashada Somaliland | KEYDMEDIA ENGLISH
Cabdi Xaashi, oo dhamaadkii bishii September 2021, kaligiis xirtay tartanka kursigii uu hore ugu fadhiyay, isla-markaana ilaa hadda ay jiraan musharixiin dalbanaya in doorashada kursigaas dib loogu laabto, ayaa RW Rooble, ku eedeeyay boob doorasho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Keydmedia Online, ayaa hore u baahisay in buuq iyo is-qabqabsi doorsho uu qarxay maalmo yar kadib, markii la soo gabagabeeyay shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee 3-9-kii bishaan ka socday Caasimadda, waxaana qeylo ka soo yeereysaa inta badan goobihii ay kuraastu yaalleen.
Waraaq uu saaray guddoomiyihii hore ee Aqalka Sare, Sentor Cabdi Xanshi Cabdilaahi, ayaa lagu sheegay in la joojiyay kuraasta waqtiga doorashadooda la shaaciyey 20-kii bishaan oo shalay ku beegneyd, sababo la xariira in aysan ku imaan rabitaanka beelihii xaqa u lahaa, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Madaxda Madasha Wadatashiga Qaranka, Gudiga Hirgelinta Doorashada heer FEIT, Gudiga Xalinta Khilaafaadka iyo Gudiga Hirgelinta doorashada heer Somaliland ee SEIT, ayuu Cabdi Xaashi ku war-galiyay in la hakiyay doorashada kuraasta Somalilland, inkasta oo uusan jirin sharci u oggolaanaya joojinta doorashada.
Cabdi Xaashi, wuxuu sheegay in ilaa bilowgii doorashada ay jireen khaladaad iyo tabashooyin ah qaabka loo maamulayo doorashada, hayeeshee, wixii ka danbeeyay dhamaadkii shirkii Madasha ee 09 January 2022, uu billowday boob cad wuxuuna soo saaray saddex qodob oo kala ah;
In doorashada Xildhibaanada ka soojeeda Gobolada Waqooyi (Somaliland) loo maro hab wanfaqasan go'aamadii iyo heshiisyadii Madashada Wadatashiga Qaran.
In la joojiyo qabashada doorashada kuransta laysku haysto ee la shaaciyey, dibna loogu soo celiyo katashigooda beelaha iyo Sulandiinta xaqa u leh.
In si caddaalad ku jirto loo maamulo shaacinta, kala horreynta iyo qabashada doorashada kuransta, loona xaqsooro oo tartan furan loo qabto musharaxiinta.
Cabdi Xaashi iyo siyaasiyiin kale, oo uu ku jiro Prof Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Boqor Buur-madow, ayaa maanta Ra’iisul Wasaaraha ku eedeeyay inuu ku tuntay heshiiskii doorashada, isla markaana uu xaafiiskiisa ka qorayo, guddiyada soo xulaya ergooyinka iyo odayaal aan aheyn kuwii rasmiga ahaa.
29 September 2021, doorasho ku sheeg ka dhacday teendho ku taalla, xaruntii hore ee Ciidanka Cirka, ayaa Guddoomiyihii Golaha Aqalka sare ee Baarlamaankii 10-aad ee JFS, Cabdi Xaashi Cabdullahi, loogu doortay inuu mar kale xubin ka noqdo Aqalka sare, iyadoo ay xusid mudan tahay in Xaashi aysan cidna la tarmain oo ilaa hadda buuq ka taagan yahay qaabkii uu ku soo baxay.
Xogo hoose oo Keydmedia Online heshay ayaa sheegaya in doodda Cabdi Xaashi iyo siyaasiyiinta la safan uu gadal ka riixayo Farmaajo, oo ay muddo kala aragti ahaayeen, haayeshee, ay hadda kala aragti duwanaantii hore meesha ka baxday, kadib wada-hadallo dhex maray Buur-madow iyo Farmaajo.